I-IFTA kunye namanye amaQela eMveliso yeMidlalo yeVidiyo afuna uNgenelelo lukaRhulumente ekuMiseni kwi-Intanethi | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » I-IFTA kunye namanye amaQela eMveliso yeMidlalo yeVidiyo afuna uNgenelelo lukaRhulumente ekuMiseni iPircy Online
Kule mihla kunye nobudala obudityanisiweyo ngokwamanani, ubuqhetseba yeyona nto iphambili, ukuba ayisiyiyo inkxalabo enkulu ngakumbi kunakuqala. Ngapha koko, nawuphina umntu okanye iqela elihambisa izinto ezinamalungelo obunini ngokungekho mthethweni kufuneka bajongane neziphumo zezenzo zabo. Izinto ezininzi ezikhoyo phaya eziqhubela phambili ubugqwetha aziziva zinjalo. Ngaphandle kweendlela ezixhaphakileyo ezinxulunyaniswa nobuqhetseba ezinje ngokukhohlisa, i-intanethi ubugebenga, ukusetyenziswa komsebenzisi okokugqibela, ukusetyenziswa gwenxa komthengi, kunye nokulayishwa kwidiski enzima, iindlela ezininzi zobuqhetseba kwi-Intanethi ziye zavela kwaye zaba yinkxalabo ekhulayo, ngakumbi ezahlukeneyo amaqela ngaphakathi kumzi mveliso weemovie njenge IFTA kwaye i MPAA.
Olu hlobo lutsha lwe-piracy kwi-intanethi luze ngendlela yepirate Iinkonzo ze-IPTV, okanye iinkonzo zokuhambisa ipirate. Iinkonzo zokusasazwa kwe-Pirate ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ezibandakanya iisayithi zepirate yasimahla ekufuneka ihlawulwe IPTV ubhaliso. Ngaphezulu kwe-1,000 engekho mthethweni IPTV Iinkonzo ezisebenza kwihlabathi jikelele, zichongiwe, kwaye zinokufumaneka ngokusebenzisa ii-portals ezinikezelweyo, izicelo zomntu wesithathu, kunye nezixhobo zobunqambi ezilungiselelwe ngokuthe ngqo ukufikelela kwiinkonzo kunye neziqwenga zomxholo ngamnye oxutywe kwimfuno. Ecaleni IPTV ukusasazeka, ezinye iintlobo zokwephulwa komthetho welungelo lokushicilela ezinje ngeendawo ezinamanzi, i-cyberlockers, indawo zokunxibelelanisa, kunye nezixhobo zokusasaza kunye nokusetyenziswa kuhlala kusele kwaye kuyaqhubeka nokuba yinxalenye yesoyikiso esivelisayo sokuxhaphaka kwi-Intanethi.
Yintoni eyenziwayo ukuCombat kwi-Pirism ekwi-Intanethi?
Le ndlela intsha yobugqwetha obuphambili ibubungqina bokuba abenzi bamalungelo obunini babonisa ukungabi nantlonelo kwimfuno yabo yokuthatha umsebenzi onzima womnye umntu awuthengise njengoko bekungowabo. Ngombulelo, isisombululo siyasetyenzwa njengoko amacandelo ohlukeneyo kumzi-bhanyabhanya edityanisiwe kumzamo wokujongana ngokusemthethweni nobugqwetha kwi-Intanethi. Kutshanje, amaqela oshishino afana ne-IFTA, MPAA, UyiloFuture, yaye ISAG-AFTRA bangenise uluhlu lweminqweno yokuchasana nemfazwe kunye neSebe lezoRhwebo lase-US. Uhlobo lwolu luhlu lweza njengenxalenye yesicelo apho iSebe lezoRhwebo lakhangela igalelo kuluntu kwimicimbi ebalulekileyo ephathelene nokusasazwa kwezinto ezinelungelo lokushicilela.
Uluhlu lwe-Hop-Wish ye-Anti-Pirance enganqwenelekiyo
Ngenxa yesiphumo soluntu malunga nendlela yokujongana nobundlobongela, yeza uluhlu lweminqweno yokulwa nobugwenxa, eyathi yaqalwa ngenjongo yokuqinisekisa ukuba urhulumente wase-US ulandela ngokulwa ubugwenxa ngokuphunyezwa kwezenzo ezithile, ezibandakanya:
Ukwazisa ngoPhando loLwaphulo-mthetho
Ukufezekisa ukuNyanzelwa kokuKhuselwa kweLungelo lokuKhusela iiMvumelwano zoRhwebo
Ukubuyiselwa kwedatha ye-WHOIS
Ukhuthazo lweyona misebenzi ilungileyo
Eyona ndawo icace gca apho urhulumente wase-US enokuthi asebenze ngokufezekileyo kukuqalisa konyanzeliso-mthetho olusebenzayo. Kwixa elidlulileyo, amaqela enze ukugqithisela kwiSebe lezoBulungisa (DoJ), kwaye oku kwakuhambelana nokunikezelwa kweenkonzo zokuhanjiswa kwamalungu, nendlela ababenakho ngayo ukuphinda baphembelele kokubini ukuthintela kunye nokukhuseleka kokusetyenziswa okukuko okwenzeka emva koku Megaupload ityala elisemthethweni Ngo-2012 apho inkampani yase-Megaupload LTD yasungula khona, UKim Dotcom, ebanjiwe ngezityholo zokwaphula umthetho welungelo lokushicilela, kubandakanya ukuphulukana ne-gigabytes ezixabisa abasebenzisi bezomthetho.
Ubunzima be-ecosystem ye-piracy buboniswa ngokukuko kuluhlu olubanzi lwabadlali kunye nabalamli, uninzi lwabo olusebenza kumabala aphesheya, ngokungathandabuzekiyo owenza ukuba umbono wokunyanzeliswa ube nzima ngakumbi. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba amaqela oshishino afuna izivumelwano zorhwebo, bacele urhulumente ukuba akhuthaze intsebenziswano yamazwe aphesheya ekulweni ubugebenga, kunye nokucela ukuba uRhulumente ahlaziye imodeli yakhe yokunyanzeliswa ejolise kumngcipheko wesithathu. -Amaqela aphakathi aba ngabadlali kumdlalo wobuqhetseba oqhubekayo ngoku ukuze iinkampani ezinje ngobhaliso besizinda, iimpahla zokubamba, ii-ISP, iinjini zokukhangela, kunye nabanye abadlali abangafunekiyo banokujongana noxanduva olululo ngokuthatha kwabo inxaxheba.
Xa kuziwa ekubuyiseni idatha ye-WHOIS, umxholo wobugqwetha uqhubeka ngakumbi kumgaqo wabucala wase-Europe we-GDPR, efuna uninzi lweenkonzo ezikwi-Intanethi kunye nezixhobo zokuqinisa imigaqo-nkqubo yabucala. Ukusukela ekuphunyezweni komgaqo-nkqubo wabucala wase-Europe we-GDPR, umbutho wobeko-liso we-domain obhalisayo u-ICANN uthathe isigqibo sokukhusela amagama kunye nolunye ulwazi lobuqu lwabanini begama lesizinda ekuboneni uluntu, nto leyo eyongeza ubunzima ekulandeleleni abanini besiza kwimeko yobugwenxa. Amaqela oshishino acele ukuba iinkcukacha ezipheleleyo ze-WHOIS zibuyiselwe kwakhona, kwaye ngesithembiso senkqubela phambili ukusuka esiphelweni se-ICANN, umba ekugqibeleni uhlala ungasonjululwanga. Ngokuqinisekileyo oku kuyakudinga ukuba iNkongolo yase-US ipasise umthetho ixhaswe liSebe lezoRhwebo ukuba inkqubela izakwenzeka.
Ukuphunyezwa kokugqwesileyo, okanye kule meko, iindlela ezingcono ngokuqinisekileyo ziya kuba zizivumelwano zokuzikhusela ngokuzithandela kunye nabalamli benkampani yesithathu. Ngokwamaqela oshishino, inqanaba lempumelelo elithile lifezekisiwe ngenxa yenethiwekhi yentengiso evala iisayithi zabaphangi kunye neenkonzo. Nokuba ezinye iindawo zentengiso ezinje, i-eBay, iAmazon, kunye neAlibaba, ziyasebenza nabanini bamalungelo ukunqanda ukwaphulwa kwamalungelo obunini, kwaye kuyafana nakwiprosesa zokuhlawula ezinjengePayPal, iVisa, kunye neMasterCard. Ngoku, ngaphandle kweli nqanaba lenkqubela phambili, iseninzi into enokwenziwa, kwaye iSebe lezoRhwebo linokwenza njalo ngokukhuthaza ezona ndlela zokulwa ubugqwetha kunye nezinye iindlela zentsebenziswano kwiinkampani ezingabonisi inqanaba lentsebenziswano .
Uninzi lweendawo ezisadinga ukuphuculwa kugxilwe kubhaliso lwamagama wesizinda kunye nokuguqula umva njengako Cloudflare. Amaqela emizi-mveliso akholelwa ekubeni ukongeza kwisibhengezo kwiisayithi kunye neenkonzo zenkampani, iinkampani eziphetheyo zinokuphumeza imigaqo-nkqubo "ephindaphindayo yokungena". Amaqela emizi-mveliso avakalise imfuno yawo ngale mithetho yomthetho xa ebhala "Ngenxa yendima ephambili yokubamba ababoneleli kwinkqubo yezendalo ekwi-intanethi, kuyacacisa ukuba uninzi lwenqaba ukuthatha inyathelo xa kusenziwa isaziso sokuba iinkonzo zabo zokubamba zisetyenziswa ngokuchasene nemithetho yabo yenkonzo ethintela ukwaphulwa komthetho wepropathi, kunye nokwaphula umthetho okucacileyo umthetho. "
I-Pirism ayinto yokuhlekisa, kwaye ngohlobo oluvele ngokukhohlakeleyo lwe-intanethi ngokunyuka, ukusasazwa okungekho mthethweni komxholo okhuselweyo kufikelele kwinqanaba apho umxholo onelungelo lokushicilela uzuze ukubonakala okukholisayo, kangangokuba kunika inqanaba lokuqinisekiswa okungaphezulu. Ivumela nabantu ababonelelwa ngezixhobo ukuba babe yinxalenye yosasazo olungekho mthethweni bengazi. Ngaphandle komcimbi wokuxhaphaka kwi-Intanethi, amaqela ahlala eqinile ethembeni lakhe lokuba urhulumente wase-US uza kusebenza nzima ukwenza amanyathelo afanelekileyo okuchasana nezi zisongelo, nokuba iSebe lezoRhwebo lase-US linokubonelela nangoncedo kwimida emine ephambili, ngokuqala Inkuthazo yamanyathelo okuzithandela.
Ngolwazi oluthe kratya kumlo olwa ne-Online Piracy, emva koko jonga: ifta-online.org/ifta-speaks-out/
UmNcedisi woPhuhliso - Oktobha 22, 2020
Umqhubi wekhamera - Oktobha 22, 2020
UmNcedisi uMhleli - Oktobha 22, 2020
anti-piracy UKhuselo lwe-anti-Pirism Cobalt Encoder Congress umxholo wepiritiki ISEBE LEZOBULUNGISA DOJ IFTA Ifilimu ye-Independent IPTV MPAA ubuqhetseba URHULUMENTE 2019-08-17
Previous: Umlungelelanisi wemveliso yeendaba
next: Ukuveliswa kweeVidiyo eziManyelwayo-Intwasahlobo ka-2015